ILBC concert ပြီးနောက် ဟိုတွေး ဒီတွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » ILBC concert ပြီးနောက် ဟိုတွေး ဒီတွေး
ILBC concert ပြီးနောက် ဟိုတွေး ဒီတွေး
Posted by weiwei on Feb 18, 2012 in Think Tank | 18 comments
ဒီကနေ့ အငယ်ဆုံးတူလေးရဲ့ concert ကို အားပေးချင်တာနဲ့ မအားတဲ့ကြားထဲက အမျိုးသားဇာတ်ရုံကို အရောက်သွားခဲ့ပါတယ် … အချိန်နဲနဲစောသွားမိတာနဲ့ အပေါက်ဝကနေ ဟိုငေး ဒီငေး ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ ဦးဦးပါလေရာပို့စ်ကိုပါ သတိရသွားခဲ့ပါသေးတယ် ..
ကလေးတွေ မိဘတွေ ကားအကောင်းစားတွေ … ချမ်းသာတဲ့မိဘတွေနဲ့ ကံကောင်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေပေါ့ … ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ ဘ၀အစမှာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကို ခံစားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့ ILBC ကျောင်းကိုလဲ ချီးကျူးမိတယ် … marketing ကောင်းပုံကိုလဲ သတိထားမိရင်း ရွာထဲက ဆြာလေး ဂီဂီ ကိုလဲ သတိရမိသေးတယ် … ILBC က မူကြိုကို အထူးဂရိုစိုက်ပြီး အကောင်းဆုံး service ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးမိဘတွေကို စွဲဆောင်နိုင်ပါတယ် … မူကြိုထားပြီးနောက် ကျေနပ်မှုရလာတဲ့အခါ မူလတန်းကို ဆက်ထားမယ် … မူလတန်းပြီးရင် အလယ်တန်း အထက်တန်းလဲ မဖြစ်မနေ ထားကြမှာပဲလေ …
မူလတန်းမှာလဲ စာသင်ကြားမှုစနစ်ကောင်းပြီး ဆရာမတွေကလဲ အထူးဂရုစိုက်ကြတာ ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ် … ကလေးတွေက ကျောင်းသွားရမှာ သိပ်ပျော်ပါတယ် … အိမ်မှာအရမ်းဆိုးနေပြီး ပြောစကားနားမထောင်ရင် ကျောင်းမပို့ဘူးပြောလိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်းလိမ်မာသွားလေ့ရှိလောက်အောင် ကျောင်းက စွဲဆောင်မှုရှိပါတယ် …
အလယ်တန်းရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ တူလေးတစ်ယောက်ကတော့ ကျောင်းစာတွေကို စိတ်မ၀င်စားတော့ပဲ တခြားကိစ္စတွေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားလာလို့ ကလေးအမေက အတော်စိတ်ညစ်နေရတယ် … ကျောင်းက ဆရာမတွေက သူတို့အရွယ်ကို စာထဲမှာစိတ်ဝင်စားအောင် စွဲဆောင်ဖို့ ခက်နေပြီလို့ သတိထားမိခဲ့တယ် …
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့သားကတော့ ၉ တန်းရောက်နေပြီး ကျောင်းတက်ရမှာ လုံးဝမပျော်တော့လို့ ကျောင်းထုတ်လိုက်ရပြီး အိမ်မှာပဲ အပြင်ကဆရာတွေကိုခေါ်သင်နေတယ်တဲ့။ အထက်တန်း ဆရာမတွေက သင်ကြားမှုပိုင်းမှာ အားနဲလာပြီး သိပ်တော်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ အမေးတွေကို ကျေနပ်အောင် မဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောတာပဲ။
အတွေးတွေက ဟိုရောက်ဒီရောက်ကနေ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစရာလေးတစ်ခု ပေါ်လာပါတယ်။ ကလေးတွေ .. ကလေးတွေ … အများစုက ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ILBC ကျောင်းဆိုတာက ပိုက်ဆံတတ်နိုင်မှထားနိုင်တဲ့ကျောင်းမှာ မိန်းကလေးဦးရေနဲ့ ယောက်ျားလေးဦးရေက သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ ရှိပါတယ် … အတန်းထဲမှာ အယောက် ၂၀ ရှိရင် ၁၅ ယောက်က ယောက်ျားလေးဖြစ်နေလေ့ရှိပါတယ် … အဲဒါ ဘာ့ကြောင့်လဲ … ယနေ့အထိ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ခွဲခြားနေတုန်းမို့လို့ပဲလေ … ယောက်ျားလေးကို ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်လို့သဘောထားပေးပေမယ့် မိန်းကလေးကိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံပဲ သဘောထားတာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် …
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အတွေးကတော့ ကျွန်မရတဲ့လစာက မူကြိုကလေးရဲ့ ကျောင်းလခလောက်တောင် မတတ်နိုင် … ကျွန်မမှာသာ ကလေးရှိရင် ဒီလိုကျောင်းမှာထားချင်မှာလား … သာမန်နယ်ကကလေးဘ၀ကိုပဲ ပေးနိုင်မှာလားလို့ တွေးနေမိတယ် …
သြော် .. မုန့်ဆီကျော်ကဘယ်နေမှန်းမသိဘူး နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလားဆိုသလိုများ ဖြစ်နေပြီလားမသိ …
လွယ်ပါဒယ်… ကိုယ့်လခနဲ့ အဲသလိုကျောင်းမျိုး မတတ်နိုင်ရင် အဲသလုကျောင်းမျိုး ကိုယ်ကထောင်ပစ်လိုက်…ဒါဆို ကိုယ့်ခလေးအတွက် ဖရီးတက်ခွင့်ရမယ်…။
သတိ။။ မိုဟာမက်တောင်ကြီးဆီ မသွားနိုင်ရင် တောင်ကြီးကို မိုဟာမက်ဆီရွှေ့ပါ…။
ဒီနေ့ ကော်မန့်တွေ ထဲမှာ ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ ဒီ ကော်မန့် အကြိုက်ဆုံးပဲ…။ +1 လုပ်သွားပါတယ်…။
သိပ်ကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာပဲ … ရှယ်ယာရှင်တွေ အရင်ရှာလိုက်အုန်းမယ် …
sandy. lay says:
Thzalot for enjoying our show!
sandy lay က preschool က တီချာတွေထဲက တစ်ယောက်များလား …
ဒီနေ့ ၂ ပွဲ ရှိတဲ့အထဲမှာ ဒုတိယပွဲကိုပဲ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ် … ပွဲအစီအစဉ်တွေ အရမ်းကောင်းပါတယ် …
Before Finale, ther isaremix performance & I was in that dance.
သိဘီသိဘီ…မယ်ဒဿဂီရိအက ကတာမဟုတ်လား။ အတော်တူလို့ ပွဲခင်းထဲမှာ တကဲ့ဘီလူး ဟုတ်မဟုတ်တောင် ငြင်းဂျသေးဒယ်..။ ကြောင်ကြီးကလည်း စိတ်ကြမ်းကိုယ်ကြမ်းဆိုတော့ တော်ရုံစိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ဘူး…။ နောက်ပွဲရှိရင်ပြောနော်…ကြောင်ကြီးလည်း အာဠာဝကဘီလူးကတတ်တယ်။။။ တယောက်ထဲကရတာ ပျင်းလို့ မကဘဲနေတာ။ ကံကြုံလို့ မုတ်ဆိတ်ပျားဆွဲပီထင်ပါ့..။
ဒေါ်ဝေ ပြောတာနဲ့ ISM (International School of Myanmar) မှာ တက်နေတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ဆီမှာ စပ်စုလိုက်တော့လည်း သူတို့ကျောင်းမှာ လည်း ယောင်္ကျားလေး ပိုများတယ်လို့ပြောတယ် .. ၈တန်းက ကလေး ကတော့ သူတို့ အတန်းထဲမှာ မိန်းကလေး ၁၀ ယောက်ရှိပြီး ယောင်္ကျားလေး ၁၅ ယောက် ရှိတယ်တဲ့။ ၁၁တန်းတက်နေတဲ့ ကလေးကတော့ သူတို့ ဂရိတ်မှာ အတိအကျ မသိပေမဲ့ ယောင်္ကျားလေး ပိုများကြောင်းပြောပါတယ် ..
ဆရာတွေ အကြောင်းမေးကြည့်တော့ နိုင်ငံခြားသားဆရာတွေက တစ်ချို့ သိပ်မသင်တတ် တဲ့သူတွေပါတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ။ ကျောင်းက တော်တဲ့ ဆရာတွေက လည်း သိပ်မမြဲဘဲ အခြား နိုင်ငံရောက်သွားကြကြောင်း ပြောပြပါတယ် ။ ဆိုလိုတာ ကတော့ အပြင်ကျောင်းတွေမှာလည်း ဆရာတွေရဲ့ ပြဿနာ ရှိကြပါတယ် ။ ဆရာတွေ မမြဲ ကြဘူး ။ contract နဲ့ လာသင်ကြတော့ ကံကောင်းတဲ့ နှစ် ဆရာကောင်းနဲ့ တွေ့ပေမဲ့ ကံမကောင်းတဲ့ နှစ်ဆို မစွံတဲ့ ဆရာတွေ နဲ့ တွေ့ပါတယ် ။
လက်ထောက် ဆရာ ဆရာမတွေက တော့ မြန်မာတွေပါ ။ သူတို့ကတော့ ပြောင်းတာနဲပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားဆရာ ကသာ အဓိကထားသင်တာပါ။
မမဝေ ပြောတာဟုတ်ပါတယ် ။ ILBC ကကလေးတွေ ကျောင်းသွားရမှာ သိပ်ကိုပျော်ကြပါတယ်။ ကျောင်းမပို့တော့ဘူးလို့ ပြောရင်ကလေးတွေက ဂျစ်နေတာကို ချက် ချင်းရပ်သွားလောက်အောင်ကို ဖြစ်တာပါ။ ပြီးတော့ သူတို့က အကြောက်အလန့် မရှိပါဘူး။ အရာရာကို စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိပြီး တခုခုကို ကိုယ်က သူတို့အတွက်လုပ်ပေးလိုက်ရင် အသေးအဖွဲပဲ ဖြစ်နေပါစေ ကျေးဇူးတင်စကားကို မမေ့မလျော့ တကူးတကဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအမူအကျင့်လေးတွေကတော့ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။
သို့သော် မြန်မာစာ အားနည်းလို့ အိမ်မှာ ဆရာမ ခေါ်သင်ရပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ဆိုးတာပါ။ မြန်မာစာဖတ်ရမှာတောင် ပျင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒါက ကျမတွေ့ဖူးတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို ပြောတာပါ။
မမဝေရေ ကျမဒီညနေပဲ ဗ၀တ သင်တန်းဆင်းပြီး ပြန်လာတဲ့ ညီမလို ခင်ရတဲ့ ဆရာမလေးနဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဦးပါလေရာကလည်း ဘယ်ကျောင်းထားရမလဲ လို့ တင်ထားပါတယ်။ ပြောချင်တာတွေကတော့ ရင်ထဲ မှာ ရှိနေပါတယ်။
ကျနော့် ကိုယ်တွေ့ ကတော့ လက်ရှိနိုင်ငံခြားသားတွေ လာရောက်သင်ကြားနေတဲ့
ကျောင်းတွေရဲ့ သင်ရိုးတွေကောင်းသလောက် ထိရောက်အောင်သင်ကြားမပေးနိုင်လို့ 
အထက်တန်းလောက်ရောက်လာရင် ဆရာ ဆရာမတွေဘက်က အားနဲလာတာတွေ ရှိသလို … စာမလိုက်နိုင်တဲ့ ကလေးတွေလဲ များလာပါတယ် … နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အားနဲလာတာပါ … တချို့မိဘတွေကတော့ ပြည်ပမှာကျောင်းထားပေးဖို့ အခက်အခဲရှိလာလို့ ပြည်တွင်းက ၁၀ တန်းစာမေးပွဲကို ဖြေဖို့အတွက် ကျောင်းပြောင်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ် …
“…အဲဒါ ဘာ့ကြောင့်လဲ … ယနေ့အထိ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ခွဲခြားနေတုန်းမို့လို့ပဲလေ … ယောက်ျားလေးကို ပညာတတ်ဖို့လိုတယ်လို့သဘောထားပေးပေမယ့် မိန်းကလေးကိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံပဲ သဘောထားတာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် …”
ကျုပ်ထင်တာတော့ ဘိုကျောင်းထားမယ့်မိဘကတော့ သားဖြစ်ဖြစ် သမီးဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကလေးတိုင်း ဘိုကျောင်းထားလိမ့်မှာပဲလို့ ထင်မိတယ်…
ဒီလိုများဖြစ်နေမလား…… ချမ်းသာတဲ့ မိဘတွေ သားသမီးထွန်းကားရင် ယောက်ျားလေးဦးရေက ပိုများနေလို့များလား….
ဥပမာ – ယောက်ျားလေးကို တမင်ရွေးတာတွေများရှိနေမလာ….. ?
ကျွန်မအသိတစ်ယောက်မှာ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ရှိပြီး သားကို ဘိုကျောင်းမှာထားပြီး သမီးကိုတော့ အိမ်နားက အစိုးရမူလတန်းကျောင်းမှာ ထားတာကို တွေ့ဖူးလို့ပါ …
ကျွန်မ အဖေကလဲ မြေးတွေအကုန်လုံးကို ဘိုကျောင်းထားပေးဖို့ မတတ်နိုင်ပေမယ့် မြေးယောက်ျားလေးကိုတော့ ထားပေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတာကို သိထားဖူးလို့ …
တူမလေးတက်နေတဲ့ မူလတန်းမှာ ကလေး ၂၀ မှာ ၁၅ ယောက်က ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတာကိုလဲ အံ့သြမိလို့ …
အဲဒါတွေပေါင်းပြီး ဟိုတွေး ဒီတွေး တွေးကြည့်မိတာ …
အော .. ဒီလိုခွဲခြားကြတယ်လား…. မိုက်လိုက်လေနော်….
တကယ်တော့ သားနဲ့သမီးယှဉ်ရင် သမီးက မိဘဆွေမျိုးပေါ် ပိုတွယ်တာ၊ ပိုစောင့်ရှောက်၊ ပိုသိတတ်တာများတယ်။
သမီးတွေက မိဘတွေအနားမှာနေပြီး အနီးကပ်လုပ်ကျွေး ပြုစု
သားတွေက အိမ်ထောင်ရှိသူရော မရှိသူရော ဝေးဝေးသွားပြီး လွတ်လွတ်နေတာ
တောမှာတော့ ကျောင်းဆိုရင် သူငယ်တန်းးကစနေရတာပဲ….
ကလေးအတွက် သုံးနိုင်တဲ့ ဘတ်ဂျက် ကအဓိက ကျပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်ကို မူတည်ပြီးမှ ဘယ်ကျောင်းမှာ ထားသင့်သလဲ ဆိုတာ
တစ်လ သောင်း ဂဏန်းလောက်နဲ့ ရနိုင်တာ
MLA ဆိုတဲ့ ကျောင်း ရွှေဂုံတိုင် သံဃာ့ ဆေးရုံနားမှာ ရှိပါတယ်။
ISM (International School of Myanmar) ဆိုတဲ့ကျောင်းကတော့
အဲဒီတော့ ကိုယ် တတ်နိုင်တာလေး နဲ့ ကလေး ဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် ကျောင်းကို ရွေးနိုင်ကြပါစေဗျာ။
မမဝေနဲ့ ကိုဘလက်ချောရေ ….
ကျနော်တို့ နယ်ဖက်တွေမှာတော့ အစိုးရကျောင်းတွေက ပေါ့ပျက်ပျက်နိုင်နေတာအမှန်ပေမယ့်
ကလေးတွေကို ကျောင်းကောင်းကောင်းထားချင်တာ မိဘတိုင်းနေမှာပါ။ ISY ကိုရောက်လို့ ကလေးသေးသေး လေးတွေအကြောက်အလန့်မရှိဆော့နေတာ ၊ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုငြင်းခုန်နေတာတွေ့တိုင်း ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ကိုယ့်တူမလေးတွေကို အဲ့လိုထားချင်စိတ် အမြဲတမ်းပေါ်လာတယ်။ ကိုယ်တွေဝင်ငွေနဲ့ ရေရှည်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ မဝေပြောတဲ့သာမာန်နယ်ကလေးဘဝမှာပဲတတ်နိုင်သလောက် အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးနေရတယ်။